अोलीलाइ प्रचण्डले भने-भरतपुरकाण्डमा म तपाइकै पक्षमा छु, तर…. – Everest Times News
अोलीलाइ प्रचण्डले भने-भरतपुरकाण्डमा म तपाइकै पक्षमा छु, तर….
२०७४ जेष्ठ २३, मंगलवार १६:२४
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भरतपुरकाण्डमा अाफु अोली र एमालेकै पक्षमा भएको तर नियमले नदिएको बताएका छन् ।
मंगलबार संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कानुनअनुसार निर्णय भएको र चितवनको कोहीसँग सम्पर्कमा नरहेको बताए । यता अोलीका अन्य प्रश्न र गुनासाप्रति पनि प्रचण्डले जवाफ फर्काएका छन् ।
आफ्नो कार्यकालमा भएको काम पनि ओलीले आफुले नै गरेको भन्दै प्रचार गरेको दुःख लागेको प्रचण्डले बताएका छन् । ‘धारा ओलीले बनाएको भन्दै टुटि मात्रै प्रचण्डले खोलेको भन्नु ओली आफै गलत हुन्’ प्रचण्डले भने ।